ताजा खबर>>लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शनमा निस्किएका तीन सय ट्याक्सी नियन्त्रणमा – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/ताजा खबर>>लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शनमा निस्किएका तीन सय ट्याक्सी नियन्त्रणमा
ताजा खबर>>लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शनमा निस्किएका तीन सय ट्याक्सी नियन्त्रणमा
१६ असार, काठमाडौं । लकडाउनका कारण आफूहरु भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रदर्शनमा निस्किएका ट्याक्सी ठाउँठाउँमा नियन्त्रणमा परेका छन् ।
महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भिमप्रसाद ढकालले हालसम्म ३ सय ८ वटा ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिइएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रदर्शनभन्दा पनि नियमलाई हेर्ने हो । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन, त्यसैले होल्ड गरिएको हो ।’
साँझ ती ट्याक्सीहरुलाई छाडिने उनले बताए । ट्याक्सी व्यवसायी दिपक केसीले भने प्रदर्शनमा निस्किएका ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले दमन गरेको बताए ।
उनले प्रश्न गरे, ‘निजी सवारीसाधन र एम्बुलेन्समा भाडा लिएर मान्छे चढाउन हुने, हामीले आफ्नो माग पनि राख्न नपाउने ?’
विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएलगत्तै गोइतले किन ब,म प,ड्काए ?
Breaking News :: स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो, ‘काठमाडौ लगायत यि जिल्लामा फे’री एक महिना लकडाउन’ !
[बिरामीको मृ’त्यु भए’पछि अ’स्पता’ल तो’डफो”ड, डा’क्टर’माथि हा’तपा’त प्रया]
भ’र्खरै हेर्नु’होस्, ड’रलाग्दो भयो, वीरेन्द्रनगर तना’वग्रस्त, प्रहरीले फा’यर खोल्यो (भिडियो हेर्नुहोस्)